Epistily voalohany nosoratan'i Petera - Wikipedia
Ny Epistily voalohany nosoratan' i Petera na Epistola voalohany nosoratan' i Masindahy Piera na Taratasy voalohany nosoratan' i Piera dia boky ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Testamenta Vaovao izay isan' ireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily Katôlika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an' ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan' ny taona 64 sy 90 no nanoratana azy. Misy toko 5 ity boky ity.
Ny ranomason'i Masindahy Piera, sary nataon'i El Greco
Ny toko voalohany dia miresaka ny anjara asan' i Kristy efa voalahatra rahateo, dia ny maha Mpanavotra azy. Ny toko faharoa sy fahatelo manazava fa izy no vato fehizoron' ny Fiangonana, fa ny fitambara' ny mpino rehetra no manao ny asam-pisoronan' ny mpanjaka (izay fantatra amin' ny fitenenana hoe "mpisorona ny mpino rehetra") sy firenena masina (1Pet. 2.9-10) ary i Kristy dia nitory teny tamin' ny fanahy voafonja.
Ny toko fahefatra sy fahadimy dia manazava ny antony itoriana ny Filazantsara (Evanjely) amin' ny maty sy ny antony tokony hiandrasan' ny loholona ny ondry.
2 Zava-nitranga manodidina
3 Ny mpanoratra
3.2 Araka ny fikarohana ankehitriny
5 Fidinana tany amin' ny fiainan-tsy hita
7.1 Epistily hafa
7.2 Lohahevitra voakasika
Πρώτη Επιστολή Πέτρου / Prôtê Epistolê Petrou no anaran' io epistily io amin' ny teny grika fa Epistula I Petri kosa amin' ny teny latina.
Ny Epistily voalohany nosoratan' i Petera dia nosoratana ho an' ny fiangonana kristiana tany Asia Minora, nosoratana avy any "Babilôna": ny fikarohana dia nonolotra ny tananan' i Rôma ho nanoratana io taratasy io. Io anarana io dia sarotra hamarinina talohan' ny taona 70 nefa io no safidin' ny mpikaroka maro.
Ity epistily ity dia tao hoe an' i Petera (na Piera) mpianatr' i Jesoa Kristy (1Pet. 1.1), "vavolombelon' ny fahorian' i Kristy" (1Pet. 5.1), sady nosoratan' i Silvana na Silasy, rahalahy mpino (1Pet. 5.12). Ny maha an' i Petera an' ity epistily ity dia hamarinin' ny lovantsofin' ny Fiangonana araka ny hita ao amin' ny 2Petera 3.1 sy araka ny filazan' i Ireneo sy i Tertoliano ary i Klemento avy any Aleksandria.
Araka ny fikarohana ankehitrinyHanova
Toherin' ny mpikaroka maro ny fahamarinan' izany lovantsofina izany noho ireto antony manaraka ireto:
Voasoratra amin' ny fiteny grikan' olona mahafehy io fiteny io ny epistily sady manao tonon-tsiahy andalana ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny grika, dia ny Septoajinta, fa tsy ny Baiboly jiosy amin' ny teny hebreo (na Tanakh).
Ny teôlôjiany dia manakaiky ny an' i Paoly. Tsy dia miresaka mivantana ny amin' ny fiainan' i Jesoa sahala amin' izay hita ao amin' ny Filazantsara (na Evanjely) izy. Na dia izany aza dia azo inoana fa mety voasoratr' i Petera nampian' i Silvana talohan' ny fanenjehana ny Kristiana nataon' i Nero tamin' ny taona 64 taor. J.K. io epistily io.
Ny zavatra niainan' ny Fiangonana resahin' ilay epistily anefa dia manambara ny zava-niseho manakaiky ny taona 70 hatramin' ny taona 80 taor. J.K. Raha marina izany filazana izany dia mety ho mpianatr' i Petera no nanoratra taorian' ny fahafatesan' i Petera tao Rôma, mba hitohizan' ny fampianarany.
Ity epistily ity dia tsy ahitana famelabelarana teôlôjika lehibe vaovao. Ny tsara homarihina dia ny hamaroan' ny firesahana ankolaka momba ny batisa (na batemy) ao amin' ny toko telo voalohany. Ny maha kristiana ny Kristiana dia miorina amin' ny batisa, ka miseho ho toy ny katekisma (na katesizy) kely na toriteny momba ny batisa izany.
Fidinan'i Jesosy tany amin'ny fiainan-tsy hita
Ao amin' io epistily io koa no hany ahitana resaka momba ny fidinan' i Jesoa Kristy nitoriteny any amin' ny fiainan-tsy hita taorian' ny fahafatesany, ao amin' ny Testamenta Vaovao (1Pet. 3.19-20).
Ny zava-kendren' ity taratasy ity dia tsy ny haneho ny fototry ny finoana. Mamporisika sy mananatra ny Kristiana ny mpanoratra mba haharitra ao amin' ny finoana, na dia miaina ao anaty fahasahiranam-be aza izy ireo, dia ny fanenjehana (1Pet. 4.12-19). Manohana ny heviny amin' ny fampahatsiahivana ny fanantenana notorina tamin' izy ireo sy amin' ny batisa izay azon' izy ireo sady nahatonga azy ireo ho "fanjakà-mpisorona sy firenena masina" (1Pet. 2.9) ny epistily. Ny Kristiana dia asainy hijoro vavolombelona eo anatrehan' ny Jentilisa (na Jentily) mba ho fahazavana ho azy ireo (1Pet. 3.15-16). Tokony hanaja ny manampahefana ara-pôlitika ny Kristiana na dia Jentilisa aza ireo manampahefana ireo (1Pet. 2.13-17) sady amporisihin' ny mpanoratra ny mpanompo (andevo) mba hanaja ny tompony, ka i Jesoa no ohatra amin' izany (2.18-25). Ny vehivavy kristiana dia tokony hanaiky ny vadiny ary ny lehilehy kristiana hanaja vady (1Pet. 3.1-7).
Tokony hiainana amim-pahamasinana ny Kristiana rehetra, dia fiainam-pitiavana, ary tsy tokony hatahotra fijaliana, na dia tsy an-drariny aza izany, satria i Kristy koa aza dia nijaly noho ny amin' ny mpanota (1Pet. 3.18). Ny fanakekezan' ny fiafaran' izao tontolo izao (2Pet. 4.7) dia antony iray koa tokony haharetantsika amin' ny finoana sy amin' ny fanantenana.
Fidinana tany amin' ny fiainan-tsy hitaHanova
Ny mpanoratra dia miresaka ny amin' ny Jesoa, taorian' ny fahafatesany, izay nitory teny tamin' ireo fanahy voafonja (1Pet. 3.18-20). Ity ampahan-dahatsoratra ity, sy ny sasany hafa koa toy izay hita ao amin' ny Evanjely nosoratan' i Matio sy Evanjely nosoratan' i Lioka (Mat. 27.52; Lio. 23.43), no anorenana ny finoan' ny Kristiana ny fidinan' i Kristy tany amin' ny fiainan-tsy hita. Na dia miovaova aza ny fivoasana io lahatsoratra io dia misy ny teôlôjiana mihevitra fa io toerana lazaina hoe fiainan-tsy hita io dia toerana sady tsy any an-danitra no tsy any amin' ny helo amin' ny hevitr' ireo teny ireo mahazatra (paradisa na afobe), izay alehan' ny fanahin' ny olona maty talohan' ny nisian' ny fivavahana kristiana ka niandrasany ny Filazantsara. Ny fiekem-pinoana voalohany niresaka momba ny fidinana any amin' ny fiainan-tsy hita dia ny fiekem-pinoana ariana tany Sirmioma tamin' ny taona 359, ny fiekem-pinoana nikeana sy kônstantinôpôlitana tamin' ny taona 360. Niely tany Andrefana izany ka nipoitra tao amin' ny fiekem-pinoana apôstôlika koa taty aoriana.
" 18 Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin' Andriamanitra, ka novonoina tamin' ny nofo, fa novelomina tamin' ny fanahy, 19 izay nandehanany sy nitoriany teny tamin' ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia izay tsy nanaiky fahiny, fony niandry ny fahari-pon' Andriamanitra tamin' ny andron' i Noa, raha mbola namboarina ny sambo-fiara, izay nidiran' ny olona vitsy, dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano, 21 izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa, izay tenan' io tandindona io,- tsy ny fanesorana ny fahalotoan' ny nofo anefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan' Andriamanitra, amin' ny nitsanganan' i Jesosy Kristy tamin' ny maty." (1Pet. 3.18-21, Ny Baiboly)
Fidinan' i Kristy any amin' ny fiainan-tsi-hita
↑ 18 Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny fanahy, 19 izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia izay tsy nanaiky fahiny, fony niandry ny fahari-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'i Noa, raha mbola namboarina ny sambo-fiara, izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano, 21 izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa, izay tenan'io tandindona io,- tsy ny fanesorana ny fahalotoan'ny nofo anefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. (1Pet. 3.18-21)
↑ "... ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodi-mandry no natsangana..." (Mat. 27.52)
↑ "Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa." (Lio. 23.43)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_voalohany_nosoratan%27i_Petera&oldid=1038808"
Dernière modification le 12 Oktobra 2021, à 12:16
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 12:16 ity pejy ity.